“waraabessi biyya hin beekne dhaqee itillee naa Afaa” jedhe.Tolasaa Tasfaayee eenyu? – Kichuu
“waraabessi biyya hin beekne dhaqee itillee naa Afaa” jedhe.Tasfaayee eenyu?
“waraabessi biyya hin beekne dhaqee itillee naa Afaa” jedhe
Tolasaa Tasfaayee Tuulii filannoo bara 1997 kongireessii biyyoolessa oromoo kan amma KFO’tti jijjiirame bakka bu’uun aanaa Ammayyaa fi Dirree Incinnii bakka bu’uun dorgome.
Filannichas bakka maxxaneetti kanaan arge KBO(kongiressiin biyyoolessa oromoo) sagalee kuma soddomii sadii(33,000) injifate.
Egaa carraa kanaan Tolasaan filatamee paarlaamaa seene.
Namni kun bara dargii Tiraafikii poolisii ture. Amala faayidaan gowwoomfamuu qaba.
Wayyaaneen nama kana akka carraatti itti fayyadamtee paartii KBO iddoo lamatti qoodde. Achumaan KBO maqaa fudhatee kan isaa godhate. Dr. Mararaan sana booda maqaa paartii biroo moggaasuuf dirqamuun KUO Ykn kongressii uummata oromoo jechuun qabsoo isaanii itti fufan. Osoo WFDO fi KUO walitti makamanii KFO hin jedhamin dura jechuu dha.Dr Mararaa Guddinaa waan nama hunda amanuuf akka tasaa chaappaa illee yeroo sana nama Tolasaa jedhamu kana harka ture. Mooraa waajjira KFO keessatti dhukaasa bansiisuun waajjira goole.
Yeroo sanatti namni kun chaappaa sanatti fayyadamee Dr. Mararaa har’aa kaasnee aangoo irraa buusne jedhanii etv’n labsan. Paartichi kana booda akka waan isaan hoogganamuutti Boordii Filannoo Biyyoolesaatti galchan. Namoonni sadii isa dabalatee ibsa sanarra turuu nan yaadadha.
1. Tolasaa Tasfaayee
2. Boonaa Taaddasaa
3ffaa Maqaa nan irraanfadhe?????
Akka maddeen isa beekanirraa Yeroo sana qulqulleeffadhetti obbo Tolasaan wayyaanee irraa qarshii miliyoona 2 fudhate. Paartichas akka jedhanitti diiguu waan dadhabaniif ergama wayyaaneen itti kennite bahuu hin dandeenye. Achumaan wayyaaneen malaammaltummaa fakkeessite hiite. “Haaduun abbaan qare abbaa qale” isa jedhan sana jechuun kanuma natti fakkaata.
Har’a immoo paartii mormituu ta’ee ashaboon ija dhiqatee qaama biroo irratti ibsa baasa.
“Re’een kan ishee hin beektuu sareen eegee gadi qabadhu” jetti
Tadesse T. Gadissa